lokusula imijikelo | yonke obungapheliyo
ithunyelwe ku ekhombayo . impucuko
Ngomhla umhlaba kufa kuzalwa ekuqaleni ukuzama brainwash ububhanxa nokwenza, ekufuneka ungenise up nethuku, obydlyachivaniya ayimfuneko ngobuchopho kunye inguqu esilandelayo indoda efana ephilayo biorobota. ukuze, ukuba “bezmozglыe” abazali musa ukuthandabuza ukubhentsisa ukuthotywa kwabo inzala esemncinane – banikeza iincwadi pre-uzilungiselele “imfundo”. “Akukho nto ukuba ukwenza: nceda sebenzisa imveliso yethu yokugqibela” – apha, ukuba ababhali bathi iincwadi zabo kaSathana.
Ukuze bazisunduze nayiphi ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni, kwaye wenze nokudideka kwimijikelo ebomini, Isizukulwana esikhulayo xelela loo zamaqhawe apho kunzima kakhulu ukuqonda umgaqo luncedo yokusebenza kwihlabathi ngaphandle. mhlawumbi, ezinjalo zixoxwa ukuba esingenanto ebomini ifowuni, kuba limela iphupha umntu kungaqatshelwanga, okanye disinformation yesiqhelo. It is hhayi ngaphandle, ukuba ababhali kula mabali nje abanayo intliziyo sithethe inyaniso, okanye mhlawumbi kwakuyingozi ubomi, nangokuba kungekho ubomi.
Ukuze ukuvuselela kwenziwe zingqondweni kunye ukuluma okuqhubekayo eyalandela, podrostaet eziphilayo ingqalelo yayigxile zangasese. Kulo mzekelo,, ithintela iimeko zokufunda ukuhlangabezana umdla impikiswano. Yeyiphi kamva ekhokelela izongezelelo engalindelekanga usapho kunye ukuvela komnye eyayilikhoboka iimeko inkqubo.
Ukuba theory umkhonzi akazange afune ndiye kuqubuda iimeko kwenkqubo – ngoko ke phantsi unyango okunamandla. Leliphi ukutshatyalaliswa okanye ukutshatyalaliswa imigaqo, evumela ithi likhoboka ukugcina stabilnst. Oku jikelele KGB, CRU, FBR (okanye ii-arhente intelligence ethile, namahlelo, imibutho ezivaliweyo nemiyalelo) nayo yonke indlu yabo yobugcisa. Ukuba ukususela ekuqaleni yobomi babantu baye nokufuna ezinye iinjongo (okubalwa zazifumaneka yakhe imigaqo beauty) – into kufutshane ebudaleni baqalise imbangise ngoncedo kwezixhobo psychotronic kunye nezinye iindlela memory erasure. Abanikazi amazwe kunye namaqela amakhulu ingqalelo, ukuba ukuqonda kwabo kuphela kuphela zehlabathi, kwaye ngokuqhelekileyo “gear bizkit” kwimibhobho yaso. Ngamanye amaxesha ziba bakholelwa, ukuba “amagiya” abanikela imibono elungileyo – ke ufakwa kuphanza. A iingcamango luncedo ibiwe phakathi onegunya “upstarts”. Kususela omzimba zebhayoloji wokuqeda, okanye umncede siyohlala ekhaya ukuba ugula ngengqondo. isimiso, bonke States ibe khona ngeendleko ebiweyo lweengcinga ezintle. ukuba, ngokubanzi, kwenza iimfihlo karhulumente. course, ukuba ukuba sesichengeni Awukwazi indiva imibutho eyahlukeneyo closed, ukufuya “ulwazi oluyimfihlo”, apho ungenza kunye namaziko karhulumente. Lonke ulwazi oluluncedo, imiphakathi avaliwe efunde, umele “ulwazi oluyimfihlo”, ukuqokelelela bona apho shy “ukuhamba phezu izidumbu”.
Ukuba iinkonzo zobuntlola kunye “umbutho eliyimfihlakalo” abakwazi ukumelana imisebenzi eyabelwe yona – unobangela kaSathana iza lempabuko neqela lakhe. Kuphela kukwiimeko ezinqabileyo, bona musa ukufikelela kwiinjongo. Modern, emva Ukuntywiliselwa isixa esikhulu unxunguphalo, “obolvanivaemomu Duraku” uqale ukususa imemori khadi. Oku kukuqinisekisa, ukuba “aphe kunaso” kamva kwabakho umnqweno ukuziphindezelela.
abantwana abancinane, ekufuneka sele baye babonisa umdla kumntu wesini esahlukileyo, omama bathi: “ufunde, bafumana imfundo, yaye “ladies ezikhoyo” ke”, kodwa xa lixesha siwazise “ke”, yaye kubonakala ukuba ixesha liza – ke ukho utata, umzalwana, umalume okanye utatomkhulu, ingxelo: “Wena ucinga ukuba andazi, ukuba ngoku uza ku “ladies ezikhoyo” hamba? Yiba indoda! Thatha nayiphi na kuzo kwaye babe nabantwana, ukuba baphile!” engaqhelekanga, kodwa apho “ladies ezikhoyo”? Kuvela, yonke iqhinga, ukuba “ladies ezikhoyo” bonke, ekuqondeni kwabo. kunokuba idiotic, nokungalungi? esibenza “umdlalo” ethile engenanzuzo “ladies ezikhoyo”, yaye xa kufika ixesha lokubalwa – i, ukuba uhlawule nto. ngaleyo, abantu, ngabanye, aphile ubomi akukho ukusetyenziswa nabani na… Okubangel 'umdla kukuba, Ngaba abazali bakho awuvumi ukuvumela abantwana babo ukuze baphile ngaphandle “ladies ezikhoyo” kwaye ngaphandle ukucinga ngezi “vobshebnyh” amathuba? mhlawumbi, Impendulo izicacele: ngubani uyavuma ukukhusela inzala yakhe Hell kaSathana? Emva kwenye umntwana uza kuqwalaselwa uhlobo bazikhethe.
♡ ★ ♥ naka – Manikiniki ♥ ★ ♡
Mhlawumbi indoda esisalamane abadala ukwenza yonke le nto ngenxa yomona, okanye mhlawumbi usebenzisa inkqubo yekhompyutha cwaka. It is hhayi ngaphandle, ukuba ubomi lubaleka ngenxa, ukuba abantwana singenako ukuyiphika abazali bakhe, okanye abazali bengakwazi ukuxelela abantwana babo inyaniso. Kufanele kuphawulwe, ukuba abameli wesini nemazi, ngokubanzi, happy ukuthatha lo mdlalo. kodwa, nakanjani, kufuneka ubhale isigwebo sabo emva: wagwetywa ukugxothwa sokugqibela ngesakhiwo yokukhuthaza zemifanekiso nabaququzeleli olungafanelekanga hayi ngexesha Nakukubona kunye belifa, yaye Amxesha olu hlobo kuxhomekeke yovalo. iqiniso, lahla “bezmozglыh okunga” rush angafanele, kwiimeko kakhulu kubalulekile nje izinto eziphilayo.
kubonakala, ukuba kwihlabathi kunye onjalo Umbutho ngabom akucingeleki, abantwana bazalwa kuphela, bayithiyayo kwaye ndinqwenela abantwana babo ububi ezizodwa kunye nokuhlupheka. Hlala ukhumbula, ukuba abantu siyibambe ezisengozini kufuneka uzive iifom ezahlukeneyo “impembelelo yeedemon”, leyo ayipheli kuphela isiphumo thile yokucinga, kwaye lukhatshwa eziphilayo zebhayoloji (ngayo) de elivisayo okanye ngokwasemzimbeni mhlophe nokungancedi lutho kwawo. Impembelelo engqondweni lo iyisa kuphela izimvo malunga isenzo kwiintlobo ezithile zobundlobongela kunye ebangela njengokonzakala emzimbeni ukuze abantu abadlulayo bayibone-by naphi okanye abanye. Oku kungenxa yokuba, ukuba “inkqubo demoni” ngabalusi kwisithuba enemiqathango ngaphandle izithintelo ukudala zonke iintlobo ingxolo siphile ubomi obusempilweni.
Nefuthe iinkqubo yeedemon ikhokelela amacandelo ezibalaseleyo oluntu ukuze abathetha ngayo: “Musa ukuba iguqule – ukuba lihlazo!” Nangona kungalindelekanga sicaciswa gca umthetho wombuso, Yimpenduka ingqalelo ukuziphatha eqhelekileyo ngezangqa zikarhulumente. ukufakwa: “Ukuba awunguye umntu iguqule ngoko a wimp kwaye kwangoko kakhulu ukuba acinge ngamandla.” – sisiseko ukwenza umbutho phambili. Oku kuyinyaniso ngakumbi kwiindawo phantsi kwephiko constellation Venatici, ngokunjalo eziphilayo ezifanelekileyo eziphilayo.
kubonakale, umnqweno ngezenzo nomntu ongathandani naye nomnqweno ukuba inani ukuya ku yokungapheli, Kuye lisivezela imbali. Kuyabonakala ukuba, a nesikhulu eliphezulu amathuba awodwa asingowokurheletya, yaye lounged ixesha, whereby yazala zazivelela. Ngenxa yoko, abantwana bazalwa nje. Ukuba sithathe ingqalelo inqanaba ndlongo ienjini ukuya izidwangube zasendle akwizikhundla eziphezulu – akukho mathandabuzo befuna ukuze kwakheke imazi kuvele nasiphi na. Ngenxa kule kukho isixa esikhulu se itshintsha enerisekanga “ukhula eziphilayo” nge “sofuzo bludskim”. Apho lonke uhlobo lomsebenzi likaRhulumente afaneleka kakhulu kwizikhundla zobunkokeli. A, kungaba, yonke embi?
izilwanyana ezincinane ezifana amabuzi, iimpuku kunye hamsters uhlobo kakhulu ngokukhawuleza, ngenxa yokuba akukho siqinisekiso ebomini yaye rhoqo nganeno ngaseludinini ukusinda. Ukuvumela ukuba ukunikela ubomi babo obayo uluhlu yenkosi. Ukuba ucinge eziphilayo mncane (ezifana kwabantu) sinokugqiba, bathanda kwakhona kwaye mouse ngokutya igazi umzimba the Planet: utshontsha ubutyebi bendalo eziphilayo, kwaye sibonise abanye, ukuba umnikazi wazo. Njengoko ukuncitshiswa loovimba zendalo, ukunciphisa inani ehlathini, Inani lezilwanyana kunye nemfuyo, njl. speed lokukhwela “impuku podplintusnyh” ukunyuka, ukutya kunye nokudla basale bedidekile ngakumbi. Musa ukusondela ku ezizalana ukuba podsazhennym yeMfuzo, kuba isebe lakho clan yonke luwele isizukulwana wesithathu, kunye notatomkhulu wam sife kunye bonke umgca kwakho generic. Ngeli lixa ubengekho na emzimbeni, uya kukwazi ukucinga ubukhulu idiocy yabo. Emva okumenza lokusinda “mouse” banda ngokukhawuleza udle konke, axolelane.
kakade, ngubani wagqiba ekubeni abe ubudoda ihlazo – ibe henpecked. Eyona iyize kakhulu ukubukela ou, leyo ufaneleke na “Vaciamadrid” nabalawulwa “kuwa phantsi isithende” iBhodi, ukuze abo “ibhulukwe eziphosiweyo”. Kwaye ukwenza oko ubuso enkulu kakhulu kwaye enomsindo. Ngelo xesha linye ke abazibiza ngokuba zinkokheli kwinkqubo ubomi inkxaso. Kuyabonakala ukuba, ukuba avela cretinism uphambene eqhubekayo. Ukuba le embi ubuncinane nengqiqo esithile yokucinga – imeko iiplanethi ezisengozini wayeza ithemba ubuncinane ezinye.
ndoda abaninzi ezinkulu lakrazuka amandla, efektivnost komisa aqukuqela luncedo kwinkqubo nobomi karhulumente. Yonke yalo ilahleka a izithethe ngokwenkqubo podkabluchnogo unqulo ihlelo ngamazwe. Kwabo banomdla, kuya kuba nzima ukufumanisa umkhosi nkqubo henpecked zokuqhuba. Enye okungephi – i Mir “henpecked”.
Abachaphazelekayo System zombi bioform, efimerichnuyu ulutsha ophilayo okanye ebhadula neziphumo ngeempazamo zabo, Iminyaka emashumi mane ubudala uqale ukucinga. iqiniso, uninzi lwabo ucinga kuphela ukuze bafumane isizathu ngenxa yokuziphatha yabo, kanti abanye bazama nje ukuba ukufihla izenzo zabo. Kodwa yintoni ukuba bathabathe nabo iminyaka emashumi mane? Ukuba kuphela umsebenzi khoboka, ngenxa, amathuba, ukuba zilungele ezinye iinjongo.
ukuba “swa ukufa” yaye “kungcolisa circle yonke” ekhokelwa uSathana engamashumi amahlanu anibanga nako kungcwaba – i, nakanjani, njengazo zonke, uthenga dryndulet ezithandwayo, ukuze ndikhwele kulo “pivot davalok”, kwaye le nkqubo iza grassirovat, ukuba lifikile ixesha lakho. Akumangalisi, kodwa amadoda amaninzi bethembisa kuchitha iminyaka engamashumi amahlanu yobomi bakhe ukuqinisekisa ukuba iimeko bekhululekile ukuba ukuhlala kwakhe, ukuphuhlisa, ukuqonda, bazi, ukufunda ezinye iimpawu-level yesithandathu, yaye emva koko njengesikhundla “singene yodaka ephantsi-frequency” ubumnandi nolonwabo, mhlawumbi, ukusuka utshintsho elibukhali kwi imeko ingqondo ocima phantsi kwaye liyayeka ukuqonda ubunyani. Ukuzalisekisa virus hlelo lwentlalo, impilo “kwizimvu ezilahlekileyo zeegusha” kuzama ukugqibezela elo.
Ingxaki iya kubakho de, de ube akukho dec wakhe egxalabeni.
“Umkhondo inkanuko ukuba yokulungelelanisa yakwalubala.” Buddha Shakyamuni uthe. Oku kuthetha, ukuba bonke ezikhokelela umonakalo ngokweemvakalelo.
March 2013 kunyaka kwikhalenda Gregorian
ღ ☼ ₪ Oliver Shanti – Ebetha Heart ღ ☼ ₪